Baro Sida Loo Kordhiyo Dakhliga Adoo Ka Faa'ideysanaya Awooda Cajiibka Ah Ee Sanduuqa Raadinta Yar Yar | Martech Zone
Raadintu waa luuqadda guud. Sanduuqa raadintu waa bogga jawaabahaaga oo dhan. Miyaad ku riyootaa gurigaaga sariir cusub oo loogu talagalay aqalkaaga? Google sariiraha hurdada ugu fiican ee guryaha yaryar. Shaqada isku dayaysa inay ka caawiso macmiilka inuu fahmo xulashooyinka ka mid noqoshada? Ka raadi boggaaga qiimaha ugu casrisan iyo faahfaahin si aad ula wadaagto.
Marka ugu sarreysa waxqabadka, raadinta iyo dhirtuba waxay kor uqaadaan khadadka sare iyo hoose. Macaamiisha wax badan ayey iibsadaan oo daacad ayey ahaadaan, shaqaaluhuna wax soo saar badan ayey leeyihiin oo waxay ku mashquulaan markay helaan waxa ay raadinayaan, oo ay helaan talooyin shaqsiyadeed.
Laga soo bilaabo waayo-aragnimada ganacsiga dhijitaalka ah illaa goobta shaqada ee caalamiga ah, Lucidworks waxay ka caawisaa shirkadaha inay dhisaan raadinta awood u leh iyo xalalka helitaanka xogta si ay uga farxiyaan adeegsadayaasha una kordhiyaan qiimaha xogta la heli karo.
Raadintu waa dariiq ka badan sanduuq keliya. Waxay sameyn kartaa ama jebin kartaa dhammaan khibradaha dijitaalka ah.
Waa kuwan dhowr tusaale oo ah sida isuga, Lucidworks AI-ku shaqeeya oo ku shaqeeya raadinta raadinta, waxay ka caawisaa tafaariiqle caalami ah kobcinta dakhliga, bangiga sare wuxuu dhisayaa xiriiro macmiil oo qoto dheer, shirkadda ugu weyn adduunka ee saliida iyo gaaska waxay awood u siineysaa go'aamada lagu taageerayo xogta, iyo keyd caafimaad oo lagu taageerayo baaritaannada degdegga ah iyo daryeelka caafimaadka.
Sidee Lenovo U Dhaqaajiyay Raadinta Si Loo Furo Ilaha Si Loo Kordhiyo Is-beddelka iyo U-Qeexitaanka
Markii Lead Global Lead Lead Marc Desormeau la wareegay kooxdii raadinta Lenovo.com, waxaa la soo dersay su'aal ah:
Maxay tahay sababta raadintu u fiicnayn karin inta aan dooneyno?
Raadinta inaad ku beddesho xalka raadinta ku saleysan FAST oo leh barxad taageeri karta isbeddel dijital ah oo buuxa, Lenovo u weecday Gartner iyo Forrester si loo hubiyo fursadaha. Lucidworks Fusion ayaa lagula taliyay. Tiknoolajiyada furan ee isha 'Fusion' waxaa ka mid ah qalab ka baxsan sanduuqa oo u oggolaanaya dabacsanaanta iyo habeynta sidaa darteed natiijooyinka raadinta waxaa si gaar ah loogu qaabeyn karaa khadka alaabta, goobta, luqadda, adeegsadaha, iyo in ka badan. Tani waxay muhiim u tahay calaamadda caalamiga ah sida Lenovo oo leh alaabooyin ku kala baahsan B2C, SMB, iyo ganacsiyada B2B oo u adeega macaamiisha 180 suuq oo ka hadlaya in ka badan 60 luqadood oo kala duwan.
Dadku waxay bilaabayaan inay fahmaan inay jiraan xog dhab ah halkan oo qiimo leh waana u isticmaali karnaa taas inaan ku soo bandhigno macaamiisheena khibrad fiican.
Marc Desourmeau, Lead Global Lead, Lenovo
Kadib hirgalinta Fusion, Lenovo wuxuu arkay tabarucaadka dakhliga sanadlaha ah iyada oo loo marayo kororka raadinta 95%. Barta taageerada macaamiisha ee Lenovo, heerarka riixitaanka iyo heerarka soo kabashada waxay muujiyeen horumar la taaban karo, oo cadeynaya in macaamiisha ay si deg deg ah ku helayaan waxyaabaha ay raadinayaan. Sidoo kale, adoo isku daraya isticmaale calaamadaha- oo ay ku jiraan guji, ku dar gaadhigii iyo iibsiga- oo ay la socdaan barashada mashiinka, kooxda raadinta waxay awood u yeesheen inay otomatig u sameeyaan qiimeynta natiijada raadinta ee tirada badan ee xogtooda aqoontooda ah. Xaqiijinta, oo lagu cabiro sida had iyo jeer macaamiishu u gujiyaan natiijada ugu horeysa iyo wixii natiijo ah ee soo socota, waxay ku fiicnaatay in ka badan 55% muddo yar oo bilo ah tan iyo markii ay bilaabeen calaamadaha Fusion.
Shaqaalaha ka socda Bangiga Sare waxay adeegsadaan talo soo jeedin shaqsiyeed si loo kordhiyo Qiimaha Nolosha Macaamiisha
Mid ka mid ah bangiyada ugu sareeya Mareykanka wuxuu la halgamayay inuu ka caawiyo la-taliyayaashooda maaliyadeed inay si dhakhso leh u aqoonsadaan shaqsi ahaan, talobixin khuseysa iyo alaabada macaamiisha. Bangiga wuxuu lahaa in kabadan 250 qaybood oo cilmi baaris maalgashi ah oo lasoosaaray lagana soo raro maalin kasta nidaamka, laakiin lataliyayaasha badankood waxay haystaan ​​wakhti ay iskood ogaadaan kaliya 15-20 dukumiinti. Suurtagal ma ahayn in la kala shaandheeyo dhammaan qalabka, lana macneeyo, oo la ogaado kan ugu habboon ee mid kasta oo ka mid ah 2,000 oo macaamiishooda ah. Waqtiga ay qaadatay in la aqoonsado xalalka ayaa loola jeeday wax soo saar hooseeya iyo fursado lumay oo lagula xiriiro macaamiisha.
Raadintu waxay udub dhexaad u tahay socodsiinta shaqada lataliyaha dhaqaalaha waxaana loo isticmaalaa in lagu beddelo maalgashi kale, ganacsi, ama qulqulka shaqada.
Lucidworks wuxuu ogaa la taliyayaasha inay u baahan yihiin inay si dhakhso leh u furaan isku xirnaanta udhaxeysa danaha macmiilka iyo qaabdhaqanka. Iyada oo loo yaqaan 'Fusion', shirkaddu waxay awood u yeelatay inay soo saarto liis mudnaan leh oo ah aragtiyo ficil ah iyo falanqeyn si looga caawiyo inay si dhakhso leh u aqoonsadaan Tallaabada xigta ee ugu Fiican shaqsi kasta oo macaamil ah. La-taliyayaasha maaliyadeed waxay hadda mudnaanta siin karaan waxa macaamiisha ay tahay inay iibsadaan ama iibiyaan maalgashi gaar ah oo ku saleysan isbeddellada iyo qaababka xisaabaadka, iyagoo siinaya nooca "aad-ogtahay" ee macaamiisha ay filayaan. “Tallaabada xigta ee ugu wanaagsan” waxay si otomaatig ah u qaadataa go'aan qaadashada waqtiga xasaasiga ah waxayna hagaajineysaa waxtarka lataliyeyaasha si ay ugu iibiyaan adeegyo macaamiil badan bartilmaameed waqti yar. Waxaas oo dhami waxay keeneen cilaaqaad qoto dheer oo lala yeesho macaamiisha iyo dakhliga oo kordhay.
Soodejiso Ebook Bilaash ah: Ubadal Khibrad Lataliyaha Dhaqaalaha ee AI
Saliida iyo Gaaska Weyn ayaa laga soosaaray aragtiyo laga soo qaaday 150 Sano oo Xogta Qiimaha Leh
Mid ka mid ah shirkadaha batroolka iyo gaaska adduunka ugu weyn ayaa hayey macluumaad dib ugu soo noqdey 150 sano oo ku baahsan waraaqo, xog-ururin, codsiyo, emayl, shaqsiyaad iyo wadayaal la wadaago, adduunka oo dhan. Sababtoo ah shaqaaluhu ma heli karin xogtii ay u baahnaayeen, waxay bilaabeen inay iska fogeeyaan, ugu dambeyntiina waxay kordhiyeen saldhigga aqoonta illaa 250 milyan oo dukumiinti ah. Helitaanka wixii ugu dambeeyay, nooc sax ah oo ku saabsan 28 qalab kala duwan oo shirkaddu gaysay ayaa ahaa mid adag. Xogta qaar lama muujin oo ilo kale ayaa ka badnaa terabyte weyn, oo aad u adag in la muujiyo. Xitaa markay qalabku soo celiyaan natiijooyin wanaagsan, dadku ma aaminin natiijooyinka — oo haddii aadan heli karin waxaad raadineyso, xogtu waxtar ma leh.
Lucidworks ayaa la yimid hawsha abuurista waayo-aragnimo xog khasab ah adoo adeegsanaya falanqeyn si loogu xiro silos macluumaadka, loo sameeyo buug hagitaan macno leh oo macnaha guud iyo ku habboonaanta leh, loona suurtageliyo adeegsadayaasha inay soo saaraan aqoonta ganacsi ee khuseysa dhammaan macluumaadka keydka taariikhiga ah. Fusion wuxuu awood u yeeshay inuu falanqeeyo malaayiin dukumiinti iyadoo la adeegsanayo ka shaqeynta luuqada dabiiciga ah (NLP) Ingiriisi, Faransiis, Jarmal, Ruush, waxay awood u siineysaa dib u helidda macluumaadka dhammaan ilaha xogta, una fududee helitaanka macluumaad cusub adoo adeegsanaya kiciyeyaal ku saleysan danaha gaarka ah ee ay keydiyaan isticmaaleyaasha. Markii la geeyo goobta, kooxaha sahamintu waxay awood u leeyihiin inay ka faa'iideystaan ​​xogta badan ee la soo saaray, isla markaana ay si dhakhso leh ula soo baxaan macluumaad sax ah markay u baahdaan, taas oo aakhirka u horseedda go'aan qaadasho wanaagsan iyo kaydinta kharashka.
Xariirka AI-Powered Research wuxuu ka caawiyaa dhakhaatiirta baarista iyo daryeelka bukaanka
AllMedx u muuqda Google loogu talagalay dhakhaatiirta. Waxay ogaayeen in dhakhaatiirtu ay ku jahwareersan yihiin matoorada raadinta caadiga ah sida Google iyo Bing maxaa yeelay natiijooyinka badanaa waxaa lagu qasi jiray waxyaabo aan la isku halleyn karin oo loogu talagalay macaamiisha iyo bukaannada. AllMedx waxay dareentay in dhakhaatiirta iyo xirfadlayaasha kale ee daryeelka caafimaad ay ka faa'iideysan karaan aaladda raadinta ee ka kooban waxyaabaha ay ka kooban tahay oo keliya maqaallada MD-la hubiyey, joornaalada caafimaadka ee saameynta sare leh, iyo xulashooyinka kale, ilaha caafimaad ee sumcadda leh. Hadafku wuxuu ahaa in laga takhaluso khuseeya, noocyada nooca macaamiisha ah ee qiimo yar-u-lahayn-u leh dhakhaatiirta raadinaya jawaabaha kiliinikada, su'aalaha daryeelka-taxaddarka ah.
Ka dib markii AllMedx ay dhistay dhismo aad u qaabeysan oo ku saleysan khibrad caafimaad oo ballaaran, waxay u baahdeen inay sahlanaato raadinta. Iyadoo la adeegsanayo algorithms-ka 'Fusion' ee 'ML', natiijooyinka raadinta ayaa loo habeeyay isticmaale kasta. Tijaabada isticmaalaha ayaa ogolaaneysa AllMedx si loo hagaajiyo-habaynta dhuumaha weydiinta iyo in la wanaajiyo khibradaha raadinta isticmaaleyaasha. Fusion-ka, AllMedx wuxuu si kalsooni leh ugu taageeri karaa adeegsadayaasheeda dhakhtarka adoo siinaya marin u helitaanka in ka badan 12 milyan oo dukumiintiyo la hubiyey iyada oo loo marayo raadinta AI-ku shaqeeya. Iyada oo ku saleysan jawaab celinta isticmaaleha dhakhtarka, kooxda AllMedx waxay ku kalsoon tahay in goobta ay kordhin doonto marin u helka macluumaadka muhiimka ah ee daryeelka-caafimaadka kaas oo gacan ka geysan doona hagaajinta daryeelka bukaanka.
Baro wax badan oo ku saabsan sida AI ay ugu beddeleyso daawada sida ugu wanaagsan
Soo ogow waxa adiga micnaheedu yahay Isbedelka Dijital ah ee Awoodda Leh
Heerka ugu sarreeya ee waayo-aragnimadan dijitaalka ah ee dhammaan dhinacyada oo dhan waa shaqsiyeyn, ama awoodda lagu saadaalin karo ujeeddada isticmaale kasta. Tani waa meesha aad ugu dambeyntii ka tagayso kumanaan xeerar gacanta lagu maareeyay oo aad ka faa'iideysan karto oo keliya falanqaynta saadaalinta, laakiin barashada mashiinka, calaamadaha, Iyo farsamaynta luqadda dabiiciga ah. Isku soo wada duuboo, dhammaan teknoolojiyaddani waxay awood u siinayaan raadintaada inay aad uga badan tahay sanduuq yar oo ku yaal geeska shaashadda.
Iyo sanduuqa raadinta maahan qeybta kaliya ee khibrada dhijitaalka ah ee u bislaaday isbadalka — sidee caqli u yahay chatbot-kaaga? Mid ka mid ah waxyaabaha ugu qiimaha badan uguna horumarka badan ee aad ganacsigaaga u sameyn karto ayaa ah inaad bilowdo xalka caqli-galka ah. Lucidworks Jawaabaha Smart waa kobciye chatbot ah oo khuseeya dhammaan farsamaynta luqadda dabiiciga ah, barashada mashiinka, Iyo signalada uruurinaya ku dhex jira Fusion khibradda sheekada. Is-adeegsi ka wanaagsan oo leh sheeko xariif ah ayaa siisa dadka isticmaala adeeg deg deg ah waxayna sii deyneysaa taageerada iyo wakiilada helpdesk in diirada la saaro kiisaska adag, ee dibada ka baxsan. Macaamiisha way ku qanacsan yihiin shaqaaluhuna waxay ku mashquulsan yihiin shaqadooda.
Hadday tahay sanduuqa raadinta maran ama caawiye caaqil ah oo caqli badan, Lucidworks Fusion wuxuu siiyaa awood-darajo meherad si loo qorsheeyo, loo horumariyo, loona geeyo codsiyada raadinta caqliga leh heer kasta, waxaana lagu aqoonsaday hogaaminta cilmi baarista tikniyoolajiyadda madaxa bannaan iyo lataliyayaasha Forrester iyo Gartner. Shirkadaha guud ahaan Global 2000 waxay ku tiirsan yihiin Lucidworks maalin kasta si ay u xoojiyaan macaamiishooda u soo jeeda iyo codsiyada raadinta shirkadaha. Ma xiiseyneysaa inaad ogaato sida aad wax badan uga heli karto raadintaada?
La xiriir Lucidworks Maanta
Tags: raadinta ku shaqeysaallmedxbangiyadachatbotwaayo-aragnimada xogtaIsbadal digital ahxoogeysteraadinta gudahaLenovoqiimaha noloshashaqooyinka waxtarka lehIsku-darka Lucidworksbarashada mashiinkafarsamaynta luqadda dabiiciga ahtallaabada xigta ee ugu fiicannlpcalaamadahajawaabo caqli badantaageeroraadinta yarkaaliyaha dalwaddii
Meheradda Crunchbase ee Iibinta: Aqoonsiga, Soo Dejinta, iyo Iswaafajinta B2B Xogta Fekerka